Lapho abangane bakho abakhulu befuna ukuthi ugonywe ...
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Lapho abangane bakho abakhulu befuna ukuthi ugonywe…
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Imfundo • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Human Rights • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Lapho abangane bakho abakhulu befuna ukuthi ugonywe…
Le nhlolovo ikhombise ukuthi abantu abangu-97% abagonyiwe babheka abangani babo “njengabantu abaphikisana ngokuphelele nama-vaxxers” futhi bathi ngeke babenze baqonde ukubaluleka kokuthola isibhamu.
U-14% wabantu baseMelika abagonyiwe sebekhiphe ubungani nabantu abakhethe ukugoma.
U-81% wabaphenduli bocwaningo lweDemocrat bathe bagonywe ngokuphelele.
Ama-64% wabaphenduli bocwaningo lweRiphabhulikhi athe agonywe ngokuphelele.
Ucwaningo olusha olwenziwe ezweni lonke, olwenziwe ekuqaleni kukaSepthemba, luveze ukuthi izakhamizi zase-US eziyi-16 ezibambe iqhaza kulolu cwaningo seziqede okungenani ubungani obuthathu ngonyaka odlule nohhafu. Cishe i-14% yabantu baseMelika abagonyiwe bathe sebebugqokile ubudlelwano nabangane abakhethe ukungagomeli i-COVID-19.
Abantu baseMelika bebelahla abangane babo ezimpilweni zabo ngesikhathi senhlekelele ye-coronavirus, futhi kulabo abakhethe ukuthola i-jabbed, izikhundla zabangane ekugomeni i-COVID-19 bekuvame ukuba yi-break-relationship.
Eqinisweni, abaphenduli abagonyiwe babenamathuba acishe aphindwe kane kunalawo angahlosile ukuthola ama-jabs - ama-66% kuya ku-17% - ukuba aqede ubungane phakathi nobhadane. Le nhlolovo ikhombise ukuthi abantu abangu-97% abagonyiwe babheka abangani babo “njengabantu abaphikisana ngokuphelele nama-vaxxers” futhi bathi ngeke babenze baqonde ukubaluleka kokuthola isibhamu.
Ukugonywa kwe-COVID-19 kungenye yezingqinamba ezihlukanisa kakhulu ezenza kube nokwehlukana phakathi kwabantu baseMelika. Abangu-14% ababalule ama-jabs njengesizathu sokuqeda ubungani uma kuqhathaniswa nabangu-16% ababesola ukwehlukana kwezepolitiki kanye no-15% owayengumlingani wakhe owayethandana nowayengumlingani wakhe. Ezinye izizathu zifaka phakathi ukuthola ukuthi abangani babo bangamanga (7%) nokuba nomngani owakha izindaba ngabo (12%).
IHollywood ngokusobala iwubusisile umqondo wokulahla abangane abenqabayo ukugoma. Umlingisikazi uJennifer Aniston - okuxakayo ukuthi, isihlabani somdlalo owuchungechunge wethelevishini i-'Bangani '- wathi ngenyanga edlule kwinhlolokhono yephephabhuku i-InStyle ukuthi useqedile ubudlelwano nabantu abenqabile ukugxekwa noma abakhetha ukungamtsheli isimo sabo sokutholwa. “Kuyihlazo ngempela,” kusho yena. “Ngisanda kulahlekelwa abantu abambalwa esimisweni sami samasonto onke.”
Umlingisikazi uJennifer Aniston
Izinga lomuthi wokugoma i-vitriol lenyuke emasontweni edlule. Isilomo somsakazo uHoward Stern muva nje uqhulule “yonke iminyango eseduze ezweni lethu engeke igonywe” wathi labo abangawatholi ama-jabs kufanele banqatshelwe imibhede yasesibhedlela uma begula. "Hlala ekhaya, ufele lapho ne-COVID yakho," esho.
Isilomo somsakazo uHoward Stern
UNew uthe u-81% wabaphenduli bocwaningo lweDemocrat bagonywe ngokuphelele, uma kuqhathaniswa nabangu-64% bamaRiphabhuliki kanye nabangu-69% abazimele. Cishe ama-57% amaRephabliki kanye nama-41% amaDemocrats athe umphakathi "ugxeka kakhulu" kubantu baseMelika abangagonyiwe.
Ukubekezelela ukuzimela komuthi wokugoma kuyancipha USA, njengoba uMongameli uJoe Biden ngesonto eledlule eyalile wonke amabhizinisi anabasebenzi abali-100 noma ngaphezulu ukuphoqa abasebenzi bawo ukuthi bathole izibhamu. "Besibekezele, kepha ukubekezela kwethu kunciphile, futhi ukwenqaba kwakho kusilahlekisele sonke," kusho uBiden ngabantu baseMelika abangagonyiwe.